Ogaden News Agency (ONA) – Maamul cusub oo loo doortay OYSU faraca Galbeedka Australia-Perth
Maamul cusub oo loo doortay OYSU faraca Galbeedka Australia-Perth
Posted by ONA Admin	/ September 30, 2013
Shalay oo taariikhdu ahayd 29/09/2013 waxaa xaflad balaadhan lagu qabtay hall ku yaala magaladaPerthkaasoo loogu dooranayay hogaanka cusub ee xoghaynta urur hoosaadka OYSU ee galbedkaAustralia. Shirka ayaa jawi aad u wanaagsan ku bilaawday waxaa lagu furay aayado quraan ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay sheekha magaalada Sheekh Cabdiqadir Cali Guray. Kadibna waxaa si rasmi ah u furay shirka gudoomiyaha jaaliyadda galbeedka Australia Mudane Adan Ibrahim Cabdiraxman (Adan Dakhare).
Gudoomiyaha jaaliyadda ayaa kasoo jeediyay madashasha khudbad aad u qiimi badan oo uu oga hadlay waxqabadka iyo dadaalka ururka dhalinyarada ay wadaan isla markaana oogu mahad celiyay dhaman xubnaha jaaliyadda sida wanaagsan ee ay ooga soo qayb galeen.
Intaas kadib waxaa lagu soo dhaweeyay cod bahiyaha gudoomiyaha xilka kadagaya ee ururka dhalinyarada Halgame Yaxye Sheekh-Abdi oo dhamaan umahad naqan xubnaha kasoo qaybgalay shirka isla mar ahaantaan soo jeediyay warbixin aad u qoto dheer oo kusaabsan taariikhdii ururka OYSU-Perth iyo waxqabadkii mudadii uu xilka ururka u hayay. Waxaa kaloo kamid ahaa xubnihii ka hadlay madasha qaar ka midda xubnaha ururka dhalinyarada Ogadenia ee OYSU-Perth, Xubnahan oo kala ah; Muna Mahad, Xamdi Axmed iyo Caasha Gaboose ayaa dhamaantoodba kasoo jeediyay hadalo kooban oo ka hadlayay dhibka ba’an ee kajira dhulka Ogadenia iyo sida loogu baahanyahay in dhiisha guntiga la isaga dhigo oo dhalinyaradu jawaab kabixiyaan dhawaaqo murugada leh ee ka soo yeedhaysay dhulkoodii hooyo Ogadenia.
Intaas ka dib, waxaa madasha si wanaagsan loogu soo dhaweeyay lataliyaha guud ee ururka OYSU-world-wide Marwo Roodo Ibrahin Cabdi Guray oo ka warbixisay guud ahaan marxaladda uu ku suganyahay ururka OYSU ee heer caalam. Waxay Roodo u mahad celisay dhamaan xubnaha ururka sida wanaagsan ay u gudanayaan waajibaadkooda muwaadininimo. Sidoo kale Marwadu waxay aad iyo aad u dhiirigalisay dhamaanba ka sooqaybgalayaashii joogay madasha shirka oo u iftiimisay in inta halgan lagu jiro dhamaanba lawada yahay dhalinyaro maadaamo loobaahanyahay dadaal iyo waxtar la iga isaga tuuro heeryada gumaysiga.
Abaarihii bartmaha shirka ayaa waxaa looga yeedhay dhanka masraxa Afhayeenka JWXO Mudane C/Qadir Xassan Hirmooge oo kumagac dheer Cadaani Hirmooge.
Mudane Cadaani ayaa warbixin dheer oo meelo badan taabanaysa u soo jeediyay joogayaashii madasha shirka ururka dhalinyarada. Waxuu warbixin faahfaahsan kabixiyay xaaladda rasmiga ah ee Ogadenia ku sugantahay manta isla mar ahaantaana sheegay in CWXO ay soo hoyiyeen guullo fara badan oo ay ka gaysteen goobaha dagaalka. Wuxuuna oogu baaqay in dhalinyaradu dadaalkoodu sii laban laabaan guushiikamadanbaysta ahna ay taagantahay.
Intaas kadib waxaa lagu soo dhaweeyay Wakiilka JWXO ee Pcificga Mudane Maxamed Ibrahim oo mahadcelin usoo jeediyay dhalinyarada iyo dadaalka aywadaan si’ loo xoreeyo Ogadenia loona garab istaago dadkooda tabarta yar. Wuxuu Wakiilku ka warbixiyay taariikhda ururka dhalinyarada iyo wiliba marxaladaha ee soo mareen guud ahaan Pacificga.
Waxyar kadibba, waxaa laguda galay doorshadii baryahanba laga shintirinayay oo masraxa la soo istaajiyay labada musharax ee ku guulaystay inay soo buuxiyaan shuruudaha musharaxnimo ee uyaala ururka OYSU. Musharixiintaas oo kala ahaa Halgame C/Fitaax Axmed Raage iyo C/Raxmaan Cali Bare oo labaduba soojeediyay hadallo ay ku soo bandhigeen waxqabdkooda haddii loo doorto xilka Xoghayenimo ee ururka OYSU-Perth. Hadaba, sidii lagu aqoonjirayba doorashooyinka ururka ayaa waxaa laguda galay u codaynta labadan musharax oo xubin walba oo katirsan ururka dhalinyarada uu ku ridtay codkiisii sanduuqa cododka lagu ridayay.
Ogu danbayntii, wuxuu gudiga doorashadu guda galay tirinta cododkii xubnaha ururka ee sida dumuqradiga ah ucodeeyay, kadibna ay ku dhawaaqeen musharixii ku guulaystay doorashada Xoghayenimo ee OYSU Perth Halgame C/Raxman Cali Bare oo siwayn loogu hambaliyay xilka culusu ee uu qaaday, halka Musharaxa kale Halgame C/Fitaax Axmed Raage uu mahad celin usoo jeediyay dhamaanba xubnihii codeeyay isla mar ahaantaan hambaliyo usoo jeediyay Halgamaha ooga guulaystay tartanka Xoghayenimo. Sidoo kale ayuu soo jeediyay musharaxa ku guulaystay mahad celin iyo bogaadin dhamaan xubnihiin ka qaybqaatay xafladdan doorashada ee ururka dhalinyarada.